HUAJING sheyga taxanaha mica synthetic wuxuu qaataa mabaadi'da dhalaalida kuleylka heerkulka sare. Marka loo eego isku-darka kiimikada dabiiciga ah iyo qaab-dhismeedka gudaha, oo la soo saaray ka dib kuleylka korantada iyo dhalaalida heerkulka sare, qaboojinta iyo crystallization, markaa mica synthetic ayaa la heli karaa.
HUAJING budada mica ee dhulka qoyan oo laga soo saaray qashinka mica dabiiciga ah ee tayada wanaagsan. Inta lagu jiro habka wax soo saarka ee nadiifinta, dhaqida, qoynta, burburinaysa cadaadiska sare, qallajinta heerkulka hoose, baaritaanka kafiican, waxay noqon doontaa macdan aad ufiican oo buuxisa. Farsamadeeda wax soo saar ee gaarka ahi waxay haysaa qaab dhismeedka xaashida gudaha ee mica, saamiga wejiga weyn, jajabka sare ee soo noqoshada, daahirnimada iyo nuuraanta, macdanta birta iyo ciida oo hooseeya iyo guryaha kale ee Warshadaha.
Huajing budada mica fasalka maadada dhismaha waa taxane ah alaabada mica aasaasiga ah oo lagu farsameeyo mica flakes oo ka timid Lingshou, gobolka Hebei. Cabbirka walxaha ee badeecada ayaa daboolaya inta udhaxeysa 5mm ilaa 10um Nidaamka isdaahirinta ayaa si isdaba-joog ah loo soo saaray in ka badan 40 sano. Waqtigan xaadirka ah, waxaa badanaa loo adeegsaday guddiga qurxinta gudaha, guddiga dusha ka laalaada, tuubbada bullaacad ee isku dhafan, qalabka dhismaha ee deegaanka u habboon, daaqadaha birta ah ee caagga ah iyo albaabada, marmar macmal ah iyo wixii la mid ah. Dahaarka la xareeyay, waxaa si xasilooni ah loogu adeegsaday warshadaha dhismaha, sida rinjiga derbiga dibedda, rinjiga calaamadda waddada, malaasyada, ranjiga culus ee ka hortagga waxyeellada.